Keating oo soo dhoweeyay heshiiskii ay saxiixdeen Gaas iyo Xaaf | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Keating oo soo dhoweeyay heshiiskii ay saxiixdeen Gaas iyo Xaaf
Keating oo soo dhoweeyay heshiiskii ay saxiixdeen Gaas iyo Xaaf
Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee Qaramada Midoobay (SRSG) u jooga Soomaaliya Michael Keating ayaa soo dhoweeyay Heshiiskii Magaalada Cadaado ay dhawaan kula saxiixdeen Madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa labada madaxweyne maamul goboleed loogu amaanay heshiiska ay kala sexiixdeen ,waxaana looga codsaday labada dhinac in ay ka shaqeeyaan in ay ka mira dhaliyaan hishiiskaas.
“Beesha Caalamka waxay soo dhoweyneysaa Heshiiska Nabadeed ay gaareen labada Madaxweyne waxaana loo baahanyahay labada dhinac in ay meel mariyaan heshiiskaas, anagana waxaan ka shaqeyneynaa in aan qeybteena ka qaadano heshiiskaas islamarkaan dhiira galino” ” ayuu yiri Keating
Madaxweynaha Puntland, Abdiweli Moxamed cali “Gaas” iyo madaxweynaha Galmudug, Axmed Ducaale Xaaf ayaa ku heshiiyay in xal kama dambeys ah laga gaaro dhibaatada Gaalkacyo.
Previous articleHorjooge ka tirsan Maleeshiyaadka Al-shabaab oo isu soo dhiibay ciidanka Xoogga Dalka.
Next articleDowladda Philippine oo sheegtay 10 ka mid ah Ciidamadeeda lagu dilay duqeyn loo waday mintidiin